तीजः प्रशासन भन्छ भड्किलो भयो, अधिकारकर्मी भन्छन् स्वन्त्रता हनन गर्न पाइँदैन - Everest Dainik - News from Nepal
तीजः प्रशासन भन्छ भड्किलो भयो, अधिकारकर्मी भन्छन् स्वन्त्रता हनन गर्न पाइँदैन
काठमाडौं । विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले तीज भड्किलो नबनाउन र मौलिक रूपमा तोकिएकै दिनहरूमा दर खाने कार्यक्रम आयोजना गर्न अनुरोध सहित गरी जारी गरेका सूचनाले महिलाहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हनन गरेको अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्।
यस्ता परिवर्तनका कारण केलाउँदै समाजशास्त्री निर्मला ढकाल भन्छिन्, यसको मुख्य कारण सहरी जीवनशैली हो। एकल परिवारमा साना घरहरूमा बस्ने मानिसकहरूको सङ्ख्या सहरमा बढ्दै गएका छन् ।
सबैजनालाई घरमै बोलाएर खुवाउने समय र ठाउँ दुवैको अभाव हुँदै गएको छ। टुँडिखेलमा गएर मनाउने कुरा आएन त्यसैले सबै खानपान र नाचगानका लागि पार्टी प्यालेस नै उपयुक्त हुँदै गएको छ ।
चोक, चौतारामा नाच्ने कुरा चाहिँ मौलिक परम्पराअनुसार भएकाले दर खाने दिनमा यहाँ भेला भएर नाचगान गर्न पाइयो। तर तीजको नाममा सार्वजनिक आवागमन अवरोध हुनेगरी र हामीसँग अनुमति नै नलिईकन गरिएका कार्यक्रम गैरकानुनी हुन्। पर्‍यो भने त्यसलाई हामीले कारबाही गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ, उनले भने।
पत्रकार एवम् अधिकारकर्मी अमृता लम्साल भन्छिन्, तीज मनाउने कि नमनाउने, मनाउने भए कसरी मनाउने भन्ने कुरा हरेक व्यक्तिले आफैँ निर्णय गर्ने कुरा हो ।
समाजका केही व्यक्तिहरू पुलिस भएर महिलाहरूलाई तिमीहरूले यस्तो लाउनुहुन्छ, यस्तो लाउनुहुन्न, खानुहुन्न, त्यहाँ जानुहुन्न भनेर सयौँ वर्षदेखि भन्ने गरेको भन्दै उनी भन्छिन्, त्यसैको निरन्तरता हो यो भन्ने मलाई लाग्छ। यसले महिलाको व्यक्तिगत चाहना र उनको स्वतन्त्रताको हनन गरेको छ ।
म पनि तीज त्यसरी मनाउने मान्छे होइन तर ःयचब िएयष्अिष्लन को वार्निङ मानेर हिंड्ने पनि होइन१
मन लागेको बेला दोहोरी रेष्टमरेन्ट पनि जान्छु, मन नलागे सात ताल्चा भित्र बस्छु। अर्काको लाइफ कसरी बॉच्नेरु अरूको कमाई कसरी खर्च गर्ने रु भनेर कानून लगाउने ?
महिलाहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुँदै गएकाले पनि उनीहरू आफ्नो रमाइलोका लागि समय र पैसा दुवै खर्च गर्न सक्ने भएका हुन् र त्यसैको कारण पनि तीजका कार्यक्रमहरु बढ्न थालेको भन्दै यसलाई नकारात्मक रूपमा लिन नहुने लम्सालको धारणा छ।
लम्साल भन्छिन्, पहिला महिलाको हातमा खर्च पनि थिएन, घरको कामबाट कहिल्यै मुक्ति पनि पाउँदैनथे। अहिले उनीहरू काम पनि गर्छन् र दुईचार पैसा कमाउँछन् ।
अब उनीहरूले आफ्नो हिसाबले पैसा खर्च गर्न, रमाइलो गर्न किन नपाउनेरु महिलाले खाएरमात्र विकृति हुन्छ भन्ने सोच नै कहाँबाट आयो भन्छु म ?
तीजमा गरिएको खर्च उत्पादनमूलक वस्तुमा हुन सके यसले अर्थतन्त्रलाई पनि फाइदा पुग्छ। सबैभन्दा ठूलो कुरा हामीले चाडपर्वलाई बोझिलो र खर्जिलो होइन सबैका लागि रमाइलो बनाउन सक्नुपर्छ, अर्थशास्त्री कुसुम शाक्यले भनिन्। बिबिसीबाट
ट्याग्स: अधिकारकर्मी, तीज, स्वन्त्रता